FJKM Ambohimanoa Alasora Betesda
SAMPANA & SAMPAN'ASA
ALAHADIN'NY MPITANDRINA 2015
FETIN'NY VITA MARIAZY
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
Romana 10 :16-21
Ry havana malala ao amin’ny Tompo, “Mampitombo ny finoantsika ny Tenin’Andriamanitra ». Izany no lohahevitra banjinintsika indray amin’izao volana Febroary izao. Ahoana ary no fomba ahafahantsika mitombo amin’ny finoana amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra ?
RAHA TE HITOMBO AMIN’NY FINOANA IANAO , IRETO NO ATAOVY :
1 HENOY NY TENIN’ANDRIAMANITRA (and 17-18)
Eo amin’ny andininy faha 17, raha ny teny grika nanoratana ny Testamenta Vaovao no adika ara-bakiteny, dia izao no lazainy: “ koa ny finoana dia avy amin’izay inoana, ary izay henoina dia ny Tenin’I Kristy.” Fanontaniana kosa no ataon’I Paoly eo amin’ny andininy faha 18 mahakasika ny Zanak’Israely fahizay: “ sao tsy nadre izy?” ary mbola I Paoly ihany no mamaly hoe TSIA. Mety misy mantsy ny milaza hoe tsy meloka eo anatrehan’ny Tenin’Andriamanitra ny Zanak’Israely satria tsy nandre ny amin’ny famonjena izy ireo. Ny valitenin’I Paoly dia milaza fa nandre izy ireny saingy tsy nanao ho zava-dehibe ny fihainoana ny Tenin’Andriamanitra.
Miteny aminao koa ny Tenin’Andriamanitra ankehitriny fa tsy azonao ialana ny hoe tsy mbola nandre aho! Aza manampi-tsofina fa henoy ny Tenin’Andriamanitra, fa tsy afa-miala amin’izany ianao. Tsy misy finoana hitombo ao aminao raha tsy mihaino ny Tenin’Andriamanitra ianao. Io fihainoana ny Tenin’Andrimanitra io araka izany no dingana voalohany ho amin’ny finoana marina. Maro ankehitriny ny ezaka atao ho fitoriana ny Tenin’Andriamanitra, koa aoka tsy hilaozanao mihodina izany, ary matoa nomen’Andriamanitra sofina ianao dia ny teniny no reneso sy henoy betsaka fa aza variana mihaino zavatra hafa.
2 EKEO IZAY AMBARAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA (and 16)
Ny antony mampikorosy fahana ny fiainan’ny firenena voafidin’Andriamanitra, dia ny Zanak’Israely, dia tsy inona akory fa ny tsy fanekena na ny fandavana ny Tenin’Andriamanitra, hany ka faharavana sy fahababoana no fiafaran’izany. Nohamafisin’I Paoly eto fa tsy ny Israely rehetra no nanaiky ny Tenin’Andriamanitra, toa midika izany fa amintsika ankehitriny izao koa dia azo antoka fa misy maro tsy manaiky ny Tenin’Andriamanitra. Dia mahatsiaro ny fitarainan’I mpaminany Isaia I Paoly izay milaza manao hoe: “Jehovah ô! Iza no nino ny teny nampitondraina anay?” Ny tsy faneken’ny Jiosy ny Filazantsara notorin’I Paoly rahateo no nahatonga azy nitodika tamin’ny jentilisa izay lazainy fa tsy firenena akory saingy nanaiky ny Vaovao mahafaly izay nambara taminy.
Ny manaiky ny Tenin’Andriamanitra dia midika fa hampihatra izay ambarany eo amin’ny fiainana. Dia hoy ny filazan’I Jakoba: “ Fa aoka ho mpankato ny Teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo.” (Jakoba 1:22). Manaova fanapahan-kevitra manaiky ny Tenin’Andriamanitra satria ny finoana ihany no mahavonjy, ary ny finoana dia avy amin’ny fanekentsika ny fahefan’ny Tenin’Andriamanitra torina amintsika. Aza isan’izay ambaran’I Paoly hoe misy tsy manaiky ny Tenin’Andriamanitra ianao. Aoka ho tsaroantsika amin’izao vanim-potoanan’ny Epifania izay midika hoe fisehoan’Andriamanitra izao fa manatrika antsika Izy ary ny fisehoany dia ao amin’ny Tenin’Andriamanitra irery ihany.
Dia ambara indray aminao ary fa raha te hitombo amin’ny finoana ianao, ary ny fitomboan’ny finoanao no anananao antoka ny fiainana mandrakizay: tsarovy fa ampy ho anao ny Tenin’Andriamanitra voasoratra ao amin’ny Soratra Masina. I Jaona dia manambara fa “nisy famantarana maro hafa koa nataon’I Jesoa teo imason’ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin’ity boky ity, fa voasoratra izao, mba hinoanareo fa I Jesoa no Kristy, Zanak’Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin’ny anarany, raha mino ianareo.”(Jao 20:30-31), ary na izao tontolo izao aza tsy omby ny boky voasoratra raha ny amin’ireo zavatra maro nataon’I Jesoa (Jao 21:25), fa ampy ho anao ny Baiboly nomeny antsika ankehitriny.
Dia izao no tokony ataonao: henoy ny Tenin’Andriamanitra, aza manampi-tsofina fa aoka halady hihaino, ary ny faharoa dia ekeo ny Tenin’Andriamanitra mba tsy ho very na mamita-tena ianao.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra! Amen.
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinit� - Sampana Tanora Kristiana
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinit� - Sampana Fivondronana Laika
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinit� - Fifohazana FFPM
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinit�
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinit� - Alahadin'ny Maritiora
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinit� - Aumonerie Nationale
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinit� - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinit�
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinit� - Alahadin'ny Sampana A.F.F
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinit�
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinit� - Radio Protestanta
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinit� - MAMIRE
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinit�
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinit� - Vondron'ny AFF
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinit�- Vondron'AFP
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
Alahady 14 Desambra 2014
Alahady faha 21 Desambra 2014
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019
Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana